လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်မြှောက်ပေးရုံနဲ့ ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရသတဲ့လား 😮 – Trend.com.mm
လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်မြှောက်ပေးရုံနဲ့ ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရသတဲ့လား 😮
Posted on August 17, 2018 by Noel
သင့်လက်နှစ်ဖက်ကို မကြာခဏဆိုသလို အပေါ်ကိုမြှောက်ထားလေ့ရှိပါသလား? ဟင် မေးခွန်းကဘယ်လိုကြီးလဲလို့တွေးမိသွားကြမယ်ထင်ပါတယ်။မေးခွန်းကတော့မမှားပါဘူး။လက်နှစ်ဖက်ကို မကြာခဏအပေါ်ကိုမြှောက်ထားလေ့ရှိလားလို့မေးရတာက ဒီလိုမြှောက်ပေးထားရင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး မျှဝေပေးချင်လို့ပါ 😁လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်ကို မြှောက်ထားပေးရုံနဲ့ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမှာလဲ? စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။အတူတူ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်
တကယ်တော့ ဒီလိုလက်နှစ်ဖက်ကို ဦးခေါင်းအပေါ်ဘက် မြှောက်ပေးတာက ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ လွယ်ကူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါတဲ့။
တစ်နေကုန်စားပွဲမှာထိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာကြည့်နေရတဲ့သူတွေအတွက် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကအသုံးဝင်ပါတယ်။ထိုင်ရတာ ညောင်းလာပြီဆိုရင် လက်သီးဆုပ်လေးဆုပ်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို အားရှိပါးရှိ အပေါ်ကို မြှောက်ထည့်လိုက်ပါ။အကြောတွေကိုဆွဲဆန့်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။မြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအသက်ကို၀၀ရှုသွင်းပြီး လက်နှစ်ဖက်ကိုပြန်ချပါ။ပြီးရင် ထပ်လုပ်ပါ။ငါးခါလောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တောင် ပုခုံးနဲ့လည်ပင်းက ကြွက်သားတွေတင်းနေတာကို ဖြေလျော့ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျန်းမာရေးပြဿနာအများစုက အလေ့အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ်။ထိုင်တဲ့အခါ ခါးကုန်းပြီးထိုင်တာက ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေတယ်လို့ကိုယ်တွေ တွေးပြီး ခါးကုန်းပြီးထိုင်လေ့ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါက တကယ်တော့ဆိုးဝါးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကိုပုံပျက်စေပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတောင် ခါးကမတ်မတ်မဖြစ်ပဲနေပါလိမ့်မယ်။လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်မြှောက်ပေးတာက ကိုယ်နေဟန်ထားမှန်ကန်စေဖို့အစပါ။လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီး တတ်နိုင်သလောက်ပူးကပ်ပေးပါ။၉၀ ဒီဂရီဖြစ်အောင်ပေါ့။မိနစ် ၂၀ တိုင်း တစ်ကြိမ်စီထလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျောရိုးကိုပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာစေပါတယ်။
အဆီကျလိုသူတွေအတွက် ဒါကလွယ်ကူထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါပဲ။နေရာကောင်းတစ်ခုကိုရှာပါ။ပြီးရင် ပုခုံးအကျယ်အတိုင်းခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုခွဲပါ။ခွဲပြီးရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်မြှောက်လိုက်ပြီး အဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်း ၂မိနစ်ကနေ ၃မိနစ်ထိနေပါ။၂မိနစ်လောက်နေပြီးရင်
လက်နှစ်ဖက်ကို အရှေ့ကိုတစ်ခါငိုက်ချလိုက်၊အနောက်ကိုတစ်ခါလှန်ချလိုက်လုပ်ပေးပါ။ပုခုံးမှာတင်းအားခံစားလာရပြီဆိုရင် လက်နှစ်ဖက်ကိုအောက်ကိုပြန်ချလို့ရပါပြီ။ဒါက ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလိုမျိုးလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
အထိုင်များပြီး ကွန်ပျူတာနေ့တိုင်းကြည့်နေရတဲ့သူတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ခါးရိုး၊ကျောရိုးနာကျင်မှုကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခံစားရတာကရေရှည်ဆိုမကောင်းပါဘူးနော်။ဒါကြောင့် နောက်ကျောဘက်နာကျင်မှုမကြာခဏမဖြစ်ဖို့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကို
အပေါ်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီး အကြောတွေဆွဲဆန့်ပေးတာက နောက်ကျောနာကျင်မှုကိုသက်သာစေပါတယ်တဲ့။
ခန္ဓာကိုယ် Balance မညီတာက ကြွက်သားတွေအားနည်းစေဖို့ကိုဦးဆောင်နေပြီး အကြော၊နှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေကိုပါထိခိုက်စေဖို့ဆက်နွယ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားညီမျှဖို့ လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ကို မကြာခဏမြှောက်မြှောက်ပေးပါ။ဒီလွယ်ကူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးက
Balance ညီမျှဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
*Text-neck syndrome ကို ဖယ်ရှားပေးတယ်
Text-neck syndrome ဆိုတာ ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတစ်ခုပါပဲ။လမ်းသွားရင်ဖုန်းကြည့်တယ်။ထိုင်နေရင်းဖုန်းကြည့်တယ်။ဖုန်းကြည့်တယ်ဆိုကတည်းကဦးခေါင်းကိုငုံ့နေရပြီမဟုတ်လား။အဲ့ဒီအခါ ကိုယ်တွေငုံ့ထားသလောက်လည်ပင်းကပါ အလေးချိန်ကိုထမ်းထားနေရသလိုပါ။ခဏလေးငုံ့နေရင်တောင် ချက်ချင်းညောင်းလာတာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုဖြစ်တာက မကောင်းပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် ဖုန်းကို ခဏခဏငုံ့ကြည့်တာမျိုးမလုပ်ပဲ ဖြစ်နိုင်ရင် ဦးခေါင်းနဲ့တစ်တန်းတည်းအနေအထားလောက်နီးနီးမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကို မကြာခဏဆိုသလို အပေါ်မြှောက်ပြီး ဦးခေါင်းကိုဘယ်ညာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။ဖုန်းကိုငုံ့ကြည့်တဲ့အချိန်၊အရေအတွက်ကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်လျှော့သင့်ပါတယ်။
လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်မြှောက်ပြီးဟိုလှည့်ဒီလှည့်လုပ်ပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဟာ အတော်ကြီးကိုထိရောက်တယ်ပြောရမလားပဲ။ခြေထောက်နဲ့ကျောရိုးတွေအားနည်းတဲ့အခါ သွေးလည်ပတ်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးကတော်တော်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို
အပေါ်မြှောက်ပေးတာက သွေးလည်ပတ်မှုကို ပုံမှန်ထက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်တဲ့။လက်နှစ်ဖက်ကိုလှုပ်ရှားပေး၊ဆွဲဆန့်ပေးတဲ့အခါ ကျောရိုးမှာရှိတဲ့နူးညံ့တဲ့တစ်ရှူးတွေကလည်းအလုပ်လုပ်ပြီးသွေးလည်ပတ်မှုကိုပုံမှန်ထက်ကောင်းမွန်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေကုန် ဘာလုပ်လုပ်ပင်ပန်းနေတယ်။တက်ကြွမှုမရှိဘူးဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းက ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာကောင်းနေမှာတော့အမှန်ပါပဲ။ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဆိုတာစိတ်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်။နေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေဝေးဝေးပြေးနိုင်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပြောရင်ယုံလိုက်ပါ။မနက်ခင်းဖြစ်စေ၊အလုပ်ခဏနားတဲ့အချိန်အတွင်းဖြစ်စေ ဒီလက်နှစ်ဖက်အပေါ်မြှောက်ပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုပြေပျောက်သွားစေပါတယ်တဲ့။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလိုပဲဖြစ်တာကြောင့် ညဘက်လည်းကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေပြီး နေ့ရက်တိုင်းကိုလန်းဆန်းစွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်စေတဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကို သတိရတဲ့အချိန်တိုင်းလုပ်ပေးပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
သငျ့လကျနှဈဖကျကို မကွာခဏဆိုသလို အပျေါကိုမွှောကျထားလရှေိ့ပါသလား? ဟငျ မေးခှနျးကဘယျလိုကွီးလဲလို့တှေးမိသှားကွမယျထငျပါတယျ။မေးခှနျးကတော့မမှားပါဘူး။လကျနှဈဖကျကို မကွာခဏအပျေါကိုမွှောကျထားလရှေိ့လားလို့မေးရတာက ဒီလိုမွှောကျပေးထားရငျ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှရေလာနိုငျတယျဆိုတဲ့အကွောငျးလေး မြှဝပေေးခငျြလို့ပါ 😁လကျနှဈဖကျကို အပျေါကို မွှောကျထားပေးရုံနဲ့ဘယျလိုအကြိုးကြေးဇူးတှရေလာမှာလဲ? စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။အတူတူ ဖတျကွညျ့လိုကျရအောငျ
တကယျတော့ ဒီလိုလကျနှဈဖကျကို ဦးခေါငျးအပျေါဘကျ မွှောကျပေးတာက ကနျြးမာရေးအတှကျကောငျးမှနျစတေဲ့ လှယျကူတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုပါတဲ့။
တဈနကေုနျစားပှဲမှာထိုငျပွီး ကှနျပြူတာကွညျ့နရေတဲ့သူတှအေတှကျ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးလေးကအသုံးဝငျပါတယျ။ထိုငျရတာ ညောငျးလာပွီဆိုရငျ လကျသီးဆုပျလေးဆုပျပွီး လကျနှဈဖကျကို အားရှိပါးရှိ အပျေါကို မွှောကျထညျ့လိုကျပါ။အကွောတှကေိုဆှဲဆနျ့သလိုဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။မွှောကျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာအသကျကိုဝဝရှုသှငျးပွီး လကျနှဈဖကျကိုပွနျခပြါ။ပွီးရငျ ထပျလုပျပါ။ငါးခါလောကျလုပျပေးမယျဆိုရငျတောငျ ပုခုံးနဲ့လညျပငျးက ကွှကျသားတှတေငျးနတောကို ဖွလြေော့ပေးပါလိမျ့မယျ။
ကနျြးမာရေးပွဿနာအမြားစုက အလအေ့ကငျြ့ဆိုးတှကွေောငျ့ဖွဈတာမြားပါတယျ။ထိုငျတဲ့အခါ ခါးကုနျးပွီးထိုငျတာက ပိုပွီးသကျတောငျ့သကျသာရှိစတေယျလို့ကိုယျတှေ တှေးပွီး ခါးကုနျးပွီးထိုငျလရှေိ့ကွတယျ။ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒါက တကယျတော့ဆိုးဝါးပါတယျ။ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ကိုယျနဟေနျထားကိုပုံပကျြစပွေီးလမျးလြှောကျတဲ့အခါမှာတောငျ ခါးကမတျမတျမဖွဈပဲနပေါလိမျ့မယျ။လကျနှဈဖကျကို အပျေါမွှောကျပေးတာက ကိုယျနဟေနျထားမှနျကနျစဖေို့အစပါ။လကျနှဈဖကျကိုအပျေါကိုမွှောကျလိုကျပွီး တတျနိုငျသလောကျပူးကပျပေးပါ။၉၀ ဒီဂရီဖွဈအောငျပေါ့။မိနဈ ၂၀ တိုငျး တဈကွိမျစီထလုပျပေးမယျဆိုရငျ ကြောရိုးကိုပုံမှနျအတိုငျးဖွဈလာစပေါတယျ။
အဆီကလြိုသူတှအေတှကျ ဒါကလှယျကူထိရောကျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးလေးပါပဲ။နရောကောငျးတဈခုကိုရှာပါ။ပွီးရငျ ပုခုံးအကယျြအတိုငျးခွထေောကျနှဈဖကျကိုခှဲပါ။ခှဲပွီးရငျလကျနှဈဖကျကိုအပျေါမွှောကျလိုကျပွီး အဲ့ဒီအနအေထားအတိုငျး ၂မိနဈကနေ ၃မိနဈထိနပေါ။၂မိနဈလောကျနပွေီးရငျ
လကျနှဈဖကျကို အရှကေို့တဈခါငိုကျခလြိုကျ၊အနောကျကိုတဈခါလှနျခလြိုကျလုပျပေးပါ။ပုခုံးမှာတငျးအားခံစားလာရပွီဆိုရငျ လကျနှဈဖကျကိုအောကျကိုပွနျခလြို့ရပါပွီ။ဒါက ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုလိုမြိုးလညျးဖွဈပါသေးတယျ။
အထိုငျမြားပွီး ကှနျပြူတာနတေို့ငျးကွညျ့နရေတဲ့သူတှဟော မကွာခဏဆိုသလို ခါးရိုး၊ကြောရိုးနာကငျြမှုကိုခံစားရတတျပါတယျ။အဲ့ဒီလိုခံစားရတာကရရှေညျဆိုမကောငျးပါဘူးနျော။ဒါကွောငျ့ နောကျကြောဘကျနာကငျြမှုမကွာခဏမဖွဈဖို့ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးလေးကိုလုပျပေးဖို့လိုပါတယျ။လကျနှဈဖကျကို
အပျေါကိုမွှောကျလိုကျပွီး အကွောတှဆှေဲဆနျ့ပေးတာက နောကျကြောနာကငျြမှုကိုသကျသာစပေါတယျတဲ့။
ခန်ဓာကိုယျ Balance မညီတာက ကွှကျသားတှအေားနညျးစဖေို့ကိုဦးဆောငျနပွေီး အကွော၊နှလုံးနဲ့သှေးကွောတှကေိုပါထိခိုကျစဖေို့ဆကျနှယျနပေါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျအနအေထားညီမြှဖို့ လကျနှဈဖကျကိုအပျေါကို မကွာခဏမွှောကျမွှောကျပေးပါ။ဒီလှယျကူတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးလေးက
Balance ညီမြှဖို့ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။
*Text-neck syndrome ကို ဖယျရှားပေးတယျ
Text-neck syndrome ဆိုတာ ဆိုရှယျမီဒီယာနဲ့ဆိုငျတဲ့ရောဂါတဈခုပါပဲ။လမျးသှားရငျဖုနျးကွညျ့တယျ။ထိုငျနရေငျးဖုနျးကွညျ့တယျ။ဖုနျးကွညျ့တယျဆိုကတညျးကဦးခေါငျးကိုငုံ့နရေပွီမဟုတျလား။အဲ့ဒီအခါ ကိုယျတှငေုံ့ထားသလောကျလညျပငျးကပါ အလေးခြိနျကိုထမျးထားနရေသလိုပါ။ခဏလေးငုံ့နရေငျတောငျ ခကျြခငျြးညောငျးလာတာသတိထားမိပါလိမျ့မယျ။ဒီလိုဖွဈတာက မကောငျးပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ ဖုနျးကို ခဏခဏငုံ့ကွညျ့တာမြိုးမလုပျပဲ ဖွဈနိုငျရငျ ဦးခေါငျးနဲ့တဈတနျးတညျးအနအေထားလောကျနီးနီးမှာကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ပွီးတော့လကျနှဈဖကျကို မကွာခဏဆိုသလို အပျေါမွှောကျပွီး ဦးခေါငျးကိုဘယျညာလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးပါ။ဖုနျးကိုငုံ့ကွညျ့တဲ့အခြိနျ၊အရအေတှကျကိုလညျးတတျနိုငျသလောကျလြှော့သငျ့ပါတယျ။
လကျနှဈဖကျကိုအပျေါမွှောကျပွီးဟိုလှညျ့ဒီလှညျ့လုပျပေးတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးလေးဟာ အတျောကွီးကိုထိရောကျတယျပွောရမလားပဲ။ခွထေောကျနဲ့ကြောရိုးတှအေားနညျးတဲ့အခါ သှေးလညျပတျမှုကိုထိခိုကျစတေဲ့အတှကျကနျြးမာရေးဆိုးကြိုးကတျောတျောမြားပါတယျ။ဒါပမေဲ့ လကျနှဈဖကျကို
အပျေါမွှောကျပေးတာက သှေးလညျပတျမှုကို ပုံမှနျထကျကောငျးမှနျစပေါတယျတဲ့။လကျနှဈဖကျကိုလှုပျရှားပေး၊ဆှဲဆနျ့ပေးတဲ့အခါ ကြောရိုးမှာရှိတဲ့နူးညံ့တဲ့တဈရှူးတှကေလညျးအလုပျလုပျပွီးသှေးလညျပတျမှုကိုပုံမှနျထကျကောငျးမှနျစတောပဲဖွဈပါတယျ။
တဈနကေုနျ ဘာလုပျလုပျပငျပနျးနတေယျ။တကျကွှမှုမရှိဘူးဆိုရငျနရေ့ကျတိုငျးက ပငျြးရိငွီးငှစေ့ရာကောငျးနမှောတော့အမှနျပါပဲ။ပငျပနျးနှမျးနယျမှုဆိုတာစိတျနဲ့လညျးသကျဆိုငျနပေါတယျ။နထေိုငျမှုပုံစံကိုပွောငျးလဲလိုကျရုံနဲ့ ပငျပနျးနှမျးနယျမှုတှဝေေးဝေးပွေးနိုငျအောငျလုပျနိုငျစှမျးရှိတယျလို့ပွောရငျယုံလိုကျပါ။မနကျခငျးဖွဈစေ၊အလုပျခဏနားတဲ့အခြိနျအတှငျးဖွဈစေ ဒီလကျနှဈဖကျအပျေါမွှောကျပေးတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးမယျဆိုရငျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှုကိုပွပြေောကျသှားစပေါတယျတဲ့။
ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုလိုပဲဖွဈတာကွောငျ့ ညဘကျလညျးကောငျးကောငျးအိပျပြျောစပွေီး နရေ့ကျတိုငျးကိုလနျးဆနျးစှာဖွတျသနျးသှားနိုငျစတေဲ့အစှမျးရှိပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးလေးကို သတိရတဲ့အခြိနျတိုငျးလုပျပေးပါလို့ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
၂ဝ၁၈မှာ Emma Stone ထက်တောင် အနုပညာကြေးမြင့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Scarlett Johansson 😍